Fanontaniana&Valiny: Fantaro i R. Ashwani Banjan Murmu, mpikatroka ho an’ny fiteny Santali · Global Voices teny Malagasy
Ashwani no hampiantrano ny kaonty @AsiaLangsOnline ny 13-19 May 2020
Voadika ny 12 Mey 2020 3:26 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, English
Sary natolotr'i R. Ashwani Banjan Murmu.
Isankerinandro, ireo vahiny mpampiantrano ho avy eo dia hamaly fanontaniana maromaro momba ny làlana nodiaviny sy hanome topimaso fohy momba ny fitenin-dry zareo. Ity ny Fanontaniana sy Valiny niarahana tamin'i R. Ashwani Banjan Murmu (@ashwanimurmu), izay hanome topimaso momba izay horesahany mandritra ny herinandro maha-mpampiantrano azy.
R. Ashwani Banjan Murmu no anarako. Mpandray anjara no sady mpandrindra ny Santali Wikipedia ary koa mpandray anjara sy mpandika lahatsoratra ho an'ny Global Voices amin'ny fiteny Santali. Izaho koa no mitantana ny “Mission Olchiki-2025″ ho an'ny fiteny Santali ao amin'ny “Kuliana Block of Mayurbhanj, Odisha (India)“. Ny “Mission Olchiki 2025″ dia fanentanana iray fampianarana ny fiteny Santali izay mametraka ny 2025 ho tanjona ara-potoana. Noho ny maha-fiteny teratany ny fiteny Santali ary efa manomboka ho very lanja, kendren'ilay fanentanana ny hanaitra ny sain'ny vahoaka Santali momba ny fitenin-dry zareo sy ny kolontsainy. Mpiara-manorina ny tarika Ol Chiki Tech ihany koa aho, izay miasa ho amin'ny fampiroboroboana ny fiteny Santali ety anaty sehatry ny aterineto.
Iray amin'ireo fiteny ofisialy ao India ny fiteny Santali, izay midika fa tafiditra ao anatin'ny tovana faha-8 ao anatin'ny Lalam-panorenan'i India. Any amin'ny tapany atsinanan'i India no ifampiresahana amin'io fiteny io (indrindra fa ireo vahoaka Santali ao Odisha, Bengal andrefana, Jharkhand, Assam) ary hatramin'ireo any amin'ny firenena mpifanolo-bodirindrina amin'i Bangladesh sy Nepal. Ivelan'ny aterineto, maromaro ihany ireo mpanoratra amin'ilay fiteny, saingy misy hantsana lehibe eo anelanelan'ireo mpampiasa azy anaty sy ivelan'ny aterineto ary ireo mpanoratra. Na dia manomboka mampiasa ny fiteniny ety anaty media sôsialy aza ny olona , tena mbola kely ny ho fahafahan'ny fiteny Santali eny anatin'ireo vovonana samihafa. Ol Chiki no iantsoana ny endri-tsoratra Santali ary tafiditra ao anatin'ny atao hoe fenitra “Unicode”. Misy roa ireo tranonkala an'ny governemanta ao India no amin'ny fiteny Santali, ary herintaona sy tapany lasa izay, natomboka ny Wikipedia amin'ny fiteny Santali. Tsy ela akory, navoakan'ny Global Voices ny tranonkala iray amin'ny fiteny Santali. Ny Story Weaver dia sehatra iray ety anaty aterineto anoratan'ireo mpanoratra tantara ho an'ny ankizy.
Mandritra ireo fito andro ireo, ho ezahako ny hifantoka amin'ny fitetezana/fivezivezen'ny fiteny Santali, hatramin'ny fanasongadinana ireo olana fototra sy fanamby atrehan'ilay fiteny.
“Ilain'ny fiteny iray ny miaina manaraka ny vanimpotoana misy azy, ary milahatra amin'ireo fiteny hafa mibahan-toerana eto amin'izao tontolo izao, raha tsy izany dia tsy ho afaka ny hitombo sy hitoetra izy,” io fisainana io no nanosika ahy ho amin'ny fikatrohana nomerika ho an'ny fiteniko. Betsaka ny fanantenana sy ny nofinofy ho an'ny fiteniko. Mbola lavitra ny làlana hizoran'ny fiteny Santali ao anatin'ny fikatrohana nomerika. Andrandraiko ny hoe ho maromaro kokoa ireo olona avy amin'ny vondrompiarahamonina niaviako no hanjohy ireo vovonana ety anaty aterineto natao hanomezana aina vao sy hampitomboana io fiteny io. Tiako ihany koa ny handefa antso ho an'izao tontolo izao mba hitondra fanohanana azo tsapain-tànana ho an'ireo fiteny rehetra tandindonin-doza sy ireo fiteny vitsy an'isa eto ambonin'ny tany, izay mifofotra mba ho velona.